Maamulka Juba oo ku deeqay lacag wax loogu qaabanayo dadka abaartu saameysay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Juba oo ku deeqay lacag wax loogu qaabanayo dadka abaartu saameysay
A warsame 27 September 2014 27 September 2014
Mareeg.com: Hoggaamiyaha maamulka KMG ah ee Jubba, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa lacag dhan $50,000 wuxuu ugu deeqay in wax looga qabto abaarta ka jirta deegaannada Jubooyinka ee uu maamulkiisa ka arrimiyo.
Axmed Madoobe oo warbaahinta kula hadlay Kismaayo ayaa sheegay in deeqda lacagta uu ugu talagalay in si horudhac ah biyo iyo raashin loogu iibiyo dadka ay abaartu saameysay, isagoo xusay in abaar baahsan oo saameysay dadka iyo duunyada ay ka jirta gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Wuxuu sheegay inay sameeyeen guddi qaabilsan wax ka qabashada abaarta, oo ka kooban wasiirro iyo ganacsato, kaas oo la doonayo inuu si deg-deg ah ula tacaalo xaaladda abaarta ee gobolka.
Wuxuu u jeediyay hay’adaha samafalka iyo dowladda Soomaaliya inay gargaar deg-deg ah la soo gaaraan dhibbaneyaasha abaarta gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Taliska Nabad Sugidda oo lacag xoog leh duldhigay madaxa Amiirka Alshabaab